vovonana Force de changement hivondronana antoko sy fikambanana politika maro ry zareo. Antony, hoy ny filoha lefitra sady mpitondra tenin’ny antoko, Alphonse Randrianambinina, dia noho ny fahatsapana fa efa very hasina eo amin’ny vahoaka ny fitondrana ankehitriny ary tsy to teny sy tsy mahafehy ny mpiasam-panjakana intsony. Porofon’izany ny fitsaram-bahoaka imason’ny mpitandro ny filaminana sy ny fihoaram-pefy ataon’ireo mpitandro filaminana tany Toamasina kanefa tsy nisy fepetra noraisina, hoy ny fanazavana. Ala nenina farany ahafahan’ny fitondrana ankehitriny mamita ny taom-piasany ny fanekena ny tolokevitra voarakitra ao anatin’ny lalàmpanorenana hovolavolain’ny Force de changement. Na ny Mompera Pédro aza efa nilaza fa tokony hitroatra ny vahoaka fa tsy rariny intsony izao ary izahay koa dia miantso fitroarana toy izany. Efa nanamarika ny mpiara-dia amin’i Jean Max Rakotomamonjy, filohan’ny antenimieram-pirenena fa ity farany no filoha nasionaly ara-dalàna ara-taratasy eny amin’ny minisiteran’ny atitany. Mivaky roa tanteraka izany ity antoko noforonin’i Herizo Razafimahaleo ity ankehitriny.